अग्नि सापकोटाका विषयमा माइतीघरमा दुःख नगर्दा हुन्छ: अध्यक्ष प्रचण्ड | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ८, २०७६ chat_bubble_outline1
Jan. 22, 2020, 7:53 p.m. प्रतिक, सिरहा
यो देश नेताहरुको मात्र हो जस्तो व्यवहार गर्नु भो कमरेड्ले ! यस्तो पाराले कहाँ पुर्याउने हो देश र समाजलाइ? हाल आएर पुष्प कमल दहालको घमण्ड्को पारो अलि माथी नै चढे जस्तो लाग्यो । भोग्न त प्रचण्डले यहि जुनिमा भोग्छन हेर्दै छन दुनियाले ।